トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ ibhizinisi Jwayelekile ngesikhathi yesikhulumi lokukhetha sasemakhazeni pachinko
Bheka ukuqinisekisa ukushiya yesikhulumi i indaba azinakwenzeka kodwa, ukuze kuvinjelwe nokumosha ukutshalwa kwezimali, idatha nezinzipho iyindawo ufuna ukubona. Ngo, ethebuleni ukukhetha ngesikhathi ibhizinisi evamile, sizobheka ukuthi kuhle kangakanani ngikhetha ukunakwa yesikhulumi noma iyiphi ingxenye. Okokuqala, sizobheka idatha.
Lona, Kuye isikhathi ukuvakashela, lapho ukuze ubone idatha, kudingeka ucabangele ikhumbula yokuthi luwusuku evamile yebhizinisi. Ngosuku evamile yebhizinisi, ngoba akukho uya welula ohlangothini pachinko emakhazeni, nje ngoba sasinamandla ngayizolo, kungcono ukuthi wayeka kusukela ekubeni ngahlala phansi ngokushesha.
ethebuleni ezisebusweni ngayizolo, ngisho ngabe inani lezikhathi nokuthi uluhlobo luni ohlangothini hit Atari futhi nenombolo linemibhikisho kosuku kubalulekile. Futhi uphumele ngayizolo, futhi eziningi ezinhle linemibhikisho ukuma ngosuku, kukhona kungenzeka ukuthi ngayizolo futhi nail ayikashintshi. Ngaphezu kwalokho, ngisho noma kungekho some Inochikugi, nail ngidlula ibhola kuze kuqale lokungeniswa izinzipho, ungase baye some.
manje we isibani idatha, kukhona uhlobo ngesivinini ukujikeleza afika ku hit uboniswa. Kuze omunye big hit, Hlala icinisekise kutsi emazinga elingakanani ngokushintshana. Ezinsukwini ezimbalwa a, inombolo enamandla efanele rotations kosuku, futhi uma hit ukugeleza wayeka hhayi igama Cishe, wukuthi kukhona Inani hit ngesikhathi ibhizinisi evamile. Uma
Horukon hamba nge umshini CR okuhloswe ngazo ngabe sebemukele esitolo, ukufunda ezifana umkhuba, ezifana igagasi ukucushwa iqembu kanye ROM ye Horukon, khetha Cishe faka eqinile-ukuphila ukuma manje. Uma
abantu abafuna njalo ukuwina Hanemono, ngoba ukulungiswa nail luhlukaniswe umphumela, ke izobonwa maphakathi nail.
Nokho, ngisho noma idatha eqinile, uma kutholakala ukuthi noma cha ukoma nail, futhi qinisa nail lokungeniswa is hhayi Kunconywa ukuthi utshalomali kangaka. Ukuma okunjalo, kusukela wenkokhelo incipha ngisho ngokushesha, futhi uma hits, kutuswa ukuba esikhundleni okuhle nezinto Imi.
Ngaphezu kwalokho, ngisho noma kukhona hit ngisho ngosuku, kahle kangaka ijubane ukujikeleza Noma uma kungenjalo, esimweni ijubane ukujikeleza kungenzeka umuzwa phansi kuyinto, ngicabanga ukuthi kungcono ukuhambisa ngokushesha afe. Ngaphezu kwalokho, nail ukulungiswa ngesikhathi ibhizinisi evamile isibe nail ejwayelekile esitolo sakhe. Uma
awukhumbuli isimo nail, ngoba nail isimo ngesikhathi kukhululwa noma lapho yokutakula iba belingafundeki, Gcina ukubhekisisa kahle. Nail evamile, kodwa kuyinto amamilimitha angu ezimbalwa isilinganiso ukuguqulwa, uyaphuma umehluko. Ukuze ubone nail wena lula ukuhlukanisa yesikhulumi kakhulu aim amehlo, kodwa noma ubani ufuna ukuhlukanisa kalula, sizokwenza sizochaza ngesivinini ukujikeleza. Uma imigomo inombolo
linemibhikisho, e wamakhaza pachinko 3.5 yen exchange, mayelana 13 izikhathi yen ayizinkulungwane, mayelana 15 izikhathi ezingu-3 yen exchange, mayelana 17 izikhathi 2.5 yen exchange, futhi izikhathi ezingaba ngu-20 e-2.3 yen lokushintshisana manje ine. Ezinye izinto ezihlukile imodeli futhi kwangathi, yebo, kodwa lokhu inani rotations ngamunye izinkulungwane isilinganiso yen Uma une nail nezinguquko ezivamile. Ngakho kakhulu noma ingavuli, ungase ucabange, kodwa lena engokoqobo.
ebhizinisini evamile, yokuthi kokuvula nail, ngoba cishe akekho, zama ukukhetha platform obuyisa okulingana ubuncane izinga imali ngenani linemibhikisho. Nokho, akwanele wamshaya yen ayizinkulungwane. Njengoba uzobe engalingani e ukugeleza ibhola, by ekugxiliseni okungenani izinkulungwane eziningana yen, singasho ezinengqondo ukunquma by kuhlaziywa isibalo linemibhikisho. 3 yen exchange isibe-20 izikhathi. Ezinye izinto ezihlukile imodeli futhi kwangathi, yebo, kodwa lokhu inani rotations ngamunye izinkulungwane isilinganiso yen Uma une nail nezinguquko ezivamile. Ngakho kakhulu noma ingavuli, ungase ucabange, kodwa lena engokoqobo.
ebhizinisini evamile, yokuthi kokuvula nail, ngoba cishe akekho, zama ukukhetha platform obuyisa okulingana ubuncane izinga imali ngenani linemibhikisho. Nokho, akwanele wamshaya yen ayizinkulungwane. Njengoba uzobe engalingani e ukugeleza ibhola, by ekugxiliseni okungenani izinkulungwane eziningana yen, singasho ezinengqondo ukunquma by kuhlaziywa isibalo linemibhikisho.